Ingxoxo Egameni Lezihlabani zeTheku Ezisadla Anhlamvana – The Ulwazi Programme
Ingxoxo Egameni Lezihlabani zeTheku Ezisadla Anhlamvana
Inkinga yokushabalala kwezilimi zendabuko nomthelela enawo ekulondolozeni nokuthuthukisa isikompilo labantu baseAfrika kulelikhulunyaka lamashumi amabili nanye
Umkhandlu waseThekwini ususungule uchungechunge lwezingxoxo zokushiyelana ngemibono nolwazi. Loluhlelo lusungulwe egameni lezihlabani zaseThekwini ezisadla anhlamvana. Ingxoxo yesibili kuloluchungechunge yayibanjelwe e Durban Art Gallery eThekwini mhla ziyishumi nanhlanu kuNtulikazi. Kulengxoxo kwakudingidwa udaba lwengozi yokushabalala ebhekene nezilimi zomdabu nomthelela wokuncintisana obhekene nalezilimi ezingeni lomhlaba kulelikhulunyaka lamashumi amabili nanye. Izazi zezolimi nezemfundo, izingcweti zezinkondlo, abacubunguli, abahlaziyi nababhali bashiyelana inkundla nemibono yabo. Lengxoxo yayigxile ekutholeni ukuthi kungani ezilimi zokudabuka e-Afrika zishabalala nokuthi kungabhekwana kanjani nalenselelo. Kulabo ababesethimbeni lezazi nabahlaziyi singabala uGcina Mhlophe ongomunye wezihlabani zaseThekwini ezisadla anhlamvana, aphinde abe ingcweti ekulondolozeni amagugu esintu esebenzisa izinganekwane, uThulani Mbuli usihlalo wohlaka olumele ulimi lwesiZulu esigungwini sezolimi sikazwelonke i-Pan South African Language Board; uZandile Radebe isazi sezemfundo kanye nombhali obhala ngolimi lwesiZulu; uNceba Gqaleni umholi wohlelo lwemithi yendabuko esikoleni sezokwelapha i-Nelson R Mandela School of Medicine aphinde abe ngusihlalo wohlelo olucwaninga ngokwelapha ngendlela yendabuko i-Indigenous Health Care System Research; nengcweti yezinkondlo uBongani Mavuso ongumdidiyeli aphinde abe ngumsakazi woKhozi FM; kanye nomhlaziyi wezindaba zepolitiki nezomphakathi uNhlanhla Mtaka, ophinde abe ngumbhali ezingosini zemibono nokuhlaziya emaphephandabeni ahlukahlukene, ikakhulukazi lawo ashicilela ngolimi lwesiZulu.
UGcina Mhlophe wakhumbuza izethameli ukuthi mandulo abantu baseAfrika babeluthuthukisa kanjani ulimi ngokuxhamana nemvelo ngokusebenzisa imilolozelo kanye nezinganekwane okwakukhombisa ukuthi abantu kanye nezilwane bamunye nendalo. Wabuye wagcizelela ukubaluleka kolimi ekutheni uzazi imvelaphi yakho.
UMbuli wagcizelela ukubaluleka kokubheka iNingizimu Afrika njengengxenye yezwekazi lase Afrika hhayi njengesiqhingi nje esizimele sodwa. Wabuye wengezelela ngelokuthi alukho ulimi olungathuthuka ngaphandle kokwesekwa ezinye izilimi. Wakhala ngokuzenyeza kwabanini bezilimi zendabuko ngezilimi zabo nangokusalela emuva kwezilimi zendabuko ekubeni izilimi zokufunda, ukufundisa nokuhlaziya.
UZandile Radebe wacela abazali ukuba bakhuthaze ukusetshenziswa kwezilimi zomdabu ezikoleni futhi wathi umphakathi kumele usebenze ngokubambisana noMnyango wezeMfundo ukuze inqubomgomo yolimi isebenze ngempumelelo. Umbono ofanayo kubo bonke ababekhona kwaba ukuthi yize noma zikhona izinqubomgomo ezivumela futhi zeseke ukusebenza ngokulinganayo kwezilimi nokuthuthukiswa kwazo zonke izilimi ezisemthethweni, abanikazi bezilimi zomdabu abanayo intshisekelo yokusebenzisa izinhlaka nemithetho kahulumeni ukukhuthaza nokulwela ukuhlonishwa nokuthuthukiswa kwezilimi zabo.
UGqaleni wenza isibonelo ngomkhakha wezokwelapha ukukhombisa ukuthi ulimi lusebenza kanjani ukulondoloza amasiko nokuchaza izinto ezithize kulomkhakha.Waveza ukuthi izinhlelo azahlukahlukene zokwelapha zinezindlela ezahlukahlukene zokusebenzisa ulimi. Ukwazi kabanzi ngomkhakha othize kuncike ekuqondeni nasekwazini kabanzi ngolimi olusetshenziswa kuwo. Ukucacisa ayekusho wabe esethi ukwenaba ngegama ‘ukwelapha’ nencazelo yalo ngokwezinhlelo zokwelapha zaseNtshonalanga nangokwezinhlelo zokwelapha ngokwesintu. Wagcizelela ukuthi leligama alisho into efana ncamashi kulezinhlelo zombili kodwa linokwenaba kakhulu uma lisetshenziswa ngokwesintu kunokuba lisetshenziswa ngokwaseNtshonalanga. UMavuso walubeka ulimi njengesikhali esasetshenziswa izifikanamthwalo ukuhlwitha imibuso e-Afrika nokucindezela abantu balelizwekazi. Wabe esevumelana noRadebe okuthi kufanele kube nomkhankaso wokulwela ukulondolozwa nokuthuthukiswa kwezilimi zendabuko.
UMtaka wakhuluma ngenkinga yokudideka kwabantu ngobubona nokuzazi ukuthi bangobani, nokulahleka kwesintu okubonakala emiphakathini yabantu ngokulangazelela kwabo ukuxuba isikompilo labo nelase Ntshonalanga. Waphinda wathi izilimi zendabuko zibukelwa phansi wase esola abanikazi bazo lezilimi ukuthi yibona abavumela ukushabalala kwazo. Waphinda wabalula ukuhluleka kukahulumeni ukuthi asukumele futhi alwele ukulondolozwa noluthuthukiswa kwalezilimi.
Kwaba nokuvumelana ukuthi kufanele kugqugquzelwe ukuthuthukiswa kanye nokulondolozwa kwezilimi zondabuko. Bagxekwa kakhulu abanikazi balezilimi ngokuqoka kwabo ukukhuluma isiNgisi kunokukhuluma izilimi zabo. Kwagcizelelwa neqhaza elibalulekile okumele libanjwe uhulumeni ekulondolozeni nasekuthuthukiseni izilimi zendabuko. Kwaphakanyiswa ukubaluleka kokusetshenziswa kwezilimi zendabuko emakhaya, nabazali banxuswa ukuba bangaziyisi izingane zabo ezikoleni ezisebenzisa isiNgisi kuphela njengolimi olusemthethweni lokufunda nokufundisa, okuyizikole okwakungezabamhlophe kuphela ngesikhathi sobandlululo.